Chirongwa 5: Sightseer, RPG ine nyika yakavhurika pane Steam | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida RPG kana mutambo-uchitamba mitambo yemavhidhiyo, saka uchafarira iyi nhau. Ndiwo mutambo wevideo wevazhinji unonzi Chirongwa 5: Kuona. Inowanikwa zvizere paStam yeLinux, Mac uye zvakare yeWindows. Zvese nekutenda kune rakanakisa basa rakaitwa neTasharen Entertainment Inc.studio.Ukuwedzera, ikozvino unogona kuzviwana muchitoro cheValve. iine 10% dhisikaundi kweinenge € 17,99.
Iri zita harisi idzva, rakaonekwa muKutanga Kuwana kubva Zvita 2017. Uye kubva ipapo vagadziri vanga vachishanda kugadzirisa mamwe matambudziko nazvo. Kubatana grafiti injini. Vakaitawo basa rakanaka kugadzira kumwe kunatsurudzwa uye shanduko, sekugadzirisa mamwe matambudziko anga ari munzvimbo chaimo umo mutambo wevhidhiyo uyu unogadziridzwa uye nehurongwa hwakagadziridzwa hwepasirose nyika.
Iwe uchave uinacho nyika huru yakavhurika kwaunogona kushandura zvese zvinoonekwa mairi uye unogona kufamba wakasununguka kuburikidza nenzvimbo dzese dhijitari, sezvazvinoitika mune iyi mhando yemavhidhiyo evhidhiyo epasirese emitambo ayo asingakuregedze kune imwe nzvimbo. Nezve ayo akakosha kwazvo maficha, unogona kuwana zvinotevera:
Huge yakavhurika nyika isina miganho.
Tsigiro multjugador Pedzisa kugona kutamba nechero iwe waunoda online uye mushandira pamwe mode.
Zvinopfuura makumi matatu biomes yakasarudzika yekushanyira uye kuongorora. Imwe yega ine kutaridzika kwayo, kunzwa, uye mamiriro.
Unogona kuvaka zvakapoteredzwa kubva kumazana ezvimedu zvakasiyana.
Inobvumira kutyaira, kuseiri uye kubhururuka ine mota dzinochinja-chinja zvakare neakawanda zvikamu.
Weaponry uye rutsigiro rwekuwedzera mods yakanyorwa muC #. Kana iwe uchida modding, mutambo uchanyora zvinyorwa zvako kuwedzera zvinhu.
Nyika yakavakirwa pa makanika chaiye, ine yakawanda zviwanikwa uye zvemakemikari mafomula anowanikwa. Zvishoma zviwanikwa.
Kugoneka kwe gadzira yako nyika kana kutamba online nevamwe.
Yakakura tech muti kugadzira tekinoroji, kubva pamagetsi ekutanga, fizikiki, nezvimwe.
Yakatengwa kurwisa system, uine mukana wekutamba sezvaunoda: kuongorora, kuvaka, kuongorora murunyararo kana kurwa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Project 5: Sightseer, RPG ine nyika yakavhurika pane Steam
Nekuderedzwa kwe10%… Ini ndinobvisa mbeva kubva kurodha bhatani zvishoma nezvishoma
Miswe 4.0 inopinda beta zvichibva paDebian 10 Buster